Sajhasabal.com |विश्वकप फुटबलमा नेपाली नजर: कुन खेलाडी कुन देशको सपोर्ट गर्दैछन् ?
विश्वकप फुटबलमा नेपाली नजर: कुन खेलाडी कुन देशको सपोर्ट गर्दैछन् ?
जेठ २५, काठमाडौं | आजको कान्तिपुरले विश्वकप विशेषांकमा 'नेपाली नजर' शिर्षकमा यो सामाग्री छापेको छ । नेपाली फुटवलरका मन पर्ने टोली, खेलाडी र सम्भावित विजेताको बारेमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
मनपर्ने टोलीः अर्जेन्टिना
मनपर्ने खेलाडीः लियोनल मेस्सी
सम्भावित विजेताः अर्जेन्टिना
अर्जेन्टिनामा विश्वस्तरीय खेलाडी र आफ्नै इतिहास छ ।
मनपर्ने टोलीः ब्राजिल
मनपर्ने खेलाडीः इकार कासियास (स्पेन)
सम्भावित विजेताः ब्राजिल
टोलीमा युवा खेलाडीको जोस छ । क्लब स्तरमा राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको टोलीको सन्तुलन पनि राम्रो छ ।
मनपर्ने टोलीः जर्मनी
मनपर्ने खेलाडीः सर्जियो रामोस (स्पेन)
सम्भावित विजेताः जर्मनी
जर्मनीको डिफेन्स निकै राम्रो छ । आक्रमणमा पनि एक से एक खेलाडी रहेका छन् ।
मनपर्ने टोलीः पोर्चुगल
मनपर्ने खेलाडीः क्रिस्टियानो रोनाल्डो (पोर्चुगल)
ब्राजिलमा आक्रामक खेलाडीको जमात स्तरीय छ । टोली निकै सन्तुलित छ ।
मनपर्ने खेलाडीः लुइस सुआरेज(उरुग्वे)
विश्वकै चर्चित खेलाडी ब्राजिलमा छन् । विशेषतः छोटो पास खेल्ने कला अद्भुत छ र विश्वकपमा फरक पार्न सक्छ ।
मनपर्ने टोलीः स्पेन
सम्भावित विजेताः स्पेन
स्पेनको राम्रो टोली बनेको छ । युवार अनुभवी खेलाडीको सम्मिश्रणले टोलीमा सन्तुलन छ ।